Umthengi waseRussia Ndwendwela iNkampani yethu
2019.10.25th lo mthengi utyelele umzi-mveliso wethu, wanelisa kakhulu izixhobo zethu zemveliso. Kungenxa yokuba izixhobo zethu zezona shishini zidumileyo kwihlabathi lonke, ukongeza kunguhlobo lwakamuva nje. Ngale ndlela sinokuqiniseka ukuba imveliso eyiyo.SinamaTshayina anobugcisa obunobuchule. Hayi nje umgangatho ophezulu, t ...
I-Bahmueller yee-nozzles kunye ne-injector ye-injection ye-1
Izinto ezithile kunye neempawu zenkqubo Oku kusivumela ukuba sizifezekise: AKUKHO Mfuneko YOKUZIPHATHA (SEAT kunye NOKUKHANYA KWAMANQAKU) I-CBN yokugaya umjikelezo wamaxesha okujikeleza <15s 2 isentimitha kwinkqubo yokulinganisa iintloko ngokuthe tye <0.3µm piezo isikhombisi sesikhombisi sesikhokelo sobubanzi be-rnessnesses Ra <0.06µm kwangaphambili. ..
I-Bahmueller yee-nozzles kunye ne-injector ye-injection ye-2
ngu admin nge-19-06-04
I-NOZZLE BODY YOKUGAYA NGAPHAKATHI 2 isikhululo somatshini weTwinner (iiyunithi ezi-2 zokuguba kumatshini omnye) ukulinganiswa kwesiqingatha sexesha lomjikelo kutyalo-mali olulinganiselweyo oludityanisiweyo lwesikhululo sokujonga kumanqanaba ama-4 emilo nobubanzi bokulungisa ukujonga ukufana <1µm adaptive grinding = osc ...